GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Noa na ezinụlọ ya banyere n’ụgbọ (1-10)
Mmiri zoro tochie ụwa (11-24)
7 Mgbe e mechara, Jehova sịrị Noa: “Banye n’ụgbọ ahụ, gị na ndị ezinụlọ gị niile, n’ihi na ọ bụ gị bụ onye ezi omume m hụrụ n’ọgbọ a.+ 2 Chịrị anụ ọ bụla dị ọcha asaa asaa,+ oké na nne. Chịrị anụ ọ bụla na-adịghị ọcha naanị abụọ abụọ, oké na nne. 3 Chịrịkwa anụ ndị na-efe efe asaa asaa, oké na nne, ka e wee chebe ụmụ ha ndụ n’ụwa niile.+ 4 N’ihi na ọ fọrọ naanị ụbọchị asaa ka m mee ka mmiri zoo+ n’ụwa ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị.+ M ga-ekpochapụkwa ihe ọ bụla dị ndụ m kere eke n’ụwa.”+ 5 Noa wee mee ihe niile Jehova nyere ya n’iwu. 6 Noa dị narị afọ isii (600) mgbe mmiri ahụ zoro tojuo ụwa.+ 7 Noa na ụmụ ya na nwunye ya na ndị nwunye ụmụ ya wee banye n’ụgbọ ahụ tupu nnukwu mmiri ahụ amalite izo.+ 8 Anụ ọ bụla dị ọcha na anụ ọ bụla na-adịghị ọcha na anụ ndị na-efe efe na ihe ọ bụla na-agagharị agagharị n’ala+ 9 banyere abụọ abụọ, oké na nne, n’ụgbọ ahụ. Ha gakwuuru Noa otú Chineke nyere Noa n’iwu. 10 Mgbe ụbọchị asaa gachara, nnukwu mmiri ahụ malitere izo n’ụwa. 11 N’abalị iri na asaa n’ọnwa nke abụọ n’afọ Noa gbara narị afọ isii (600), n’ụbọchị ahụ, a gbaghere nnukwu mmiri niile dị na mbara igwe, megheekwa ọnụ ụzọ mmiri niile dị n’eluigwe.+ 12 Mmiri wee zosie ike n’ụwa ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị. 13 N’ụbọchị ahụ, Noa banyere n’ụgbọ ahụ, ya na ụmụ ya bụ́ Shem, Ham, na Jefet,+ nakwa nwunye Noa na ndị nwunye ụmụ ya atọ.+ 14 Ha banyere, ha na anụ ọhịa ọ bụla n’ụdị ya dị iche iche, na anụ ụlọ ọ bụla n’ụdị ya dị iche iche, na anụ ọ bụla na-arị arị n’ụdị ya dị iche iche, na anụ ọ bụla na-efe efe n’ụdị ya dị iche iche, ya bụ, nnụnụ ọ bụla na ihe ọ bụla nwere nku. 15 Ụdị anụ ọ bụla na-eku ume nọ na-agakwuru Noa abụọ abụọ n’ime ụgbọ ahụ. 16 Ha wee banye otú Chineke nyere Noa n’iwu. Ụdị anụ ọ bụla banyere oké na nne. Mgbe ha banyechara, Jehova mechiri ọnụ ụzọ ụgbọ ahụ. 17 Mmiri ahụ zogidere n’ụwa ruo ụbọchị iri anọ. Mmiri ahụ nọ na-eto wee malite ibu ụgbọ ahụ, ụgbọ ahụ nọkwa na-ese n’elu mmiri n’ụwa. 18 Mmiri ahụ wee karịa akarịa, na-etochikwa ebe niile n’ụwa. Ma ụgbọ ahụ nọ na-ese n’elu mmiri ahụ. 19 Mmiri ahụ karịrị akarị n’ụwa nke na o tochiri ugwu niile dị elu dị n’ụwa.*+ 20 Mmiri ahụ ji kubit* iri na ise tofee ugwu ndị ahụ. 21 Ihe niile e kere eke* na-agagharị n’ụwa wee laa n’iyi,+ ya bụ, anụ ndị na-efe efe, anụ ụlọ, anụ ọhịa, obere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ,* na mmadụ niile.+ 22 Ihe ọ bụla na-eku ume nọ n’elu ala nwụrụ.+ 23 Chineke* wee kpochapụ ihe ọ bụla dị ndụ n’ụwa, ma mmadụ ma anụmanụ ma anụ ndị na-arị arị ma anụ ndị na-efe efe. O kpochapụrụ ha niile n’ụwa.+ Naanị Noa na ndị ya na ha nọ n’ụgbọ fọrọ ndụ.+ 24 Mmiri ahụ tochiri ụwa ruo otu narị ụbọchị na iri ise (150).+
^ O nwere ike ịbụ obere ụmụ anụmanụ ndị na-ebikọ ọnụ.